The Android 5.0 Lollipop Rom ugu fiican ee xilligan waxaa loo yaqaan LiquidSmooth | Androidsis
Waan sii wadaynaa cusbooneysiin rasmi ah oo ku saabsan Android 5.0 Lollipop, markan waxaan idinla wadaagayaa dhamaantiin waxa aragtidayda shaqsi ahaaneed tahay Romo Lollipop-ka ugu fiican ee loogu talagalay LG G2 nooc kasta oo ay ku kala duwan yihiin ama qaabkeedu yahay.
Romkaan cusub ee kooxda sharafta leh ee LiquidSmooth ayaa u habeeyay hawlgalkeeda ugu badnaan LG G2 iyo noocaan Alfa ee ku saleysan Cyanogenmod 12, waxay u shaqeysaa sifiican qofkasta oo dhihi kara inuu kujiro nuuca noocaan ah. Dhinacyadeeda si loo muujiyo, waxaa xusid mudan dheecaanka baaxadda leh ee nidaamka, iyo sidoo kale horumarka la taaban karo ee isticmaalka batteriga ama xoogaa siyaado ah sida awood u lahaanshaha cabbirka cabbirka badhanka ama badhamada dalwaddii. Marka xigta waxaan u sharaxayaa habka rakibida ee loogu talagalay isticmaaleyaasha cusub iyo sidoo kale habka saxda ah ee loo cusbooneysiin karo LG G2 haddii aan horeyba uga nimid nooc ka mid ah Android Lollipop si aanan u lumin codsiyadayada iyo xogta keydsan.
Mid ka mid ah sheekooyinka ugu waaweyn ee tan ku jira Rom Android 5.0 Lollipop loogu talagalay LG G2, waa ka mid noqoshada dejinta lafteeda qayb naga caawin doonta ku cusbooneysii OTA noocyada cusub ee dareenkan Rom Android Lollipop.
1 Faylasha loo baahan yahay si loo rakibo ama loo cusbooneysiiyo LG G2-gaaga loo yaqaan 'Android Lollipop' oo ka socda LiquidSmooth
2 Sida loo rakibo Rom LiquidSmooth Android 5.0 Lollipop LG G2 (dhammaan noocyada)
2.1 1aad - Cusboonaysiinta ka socota Rom kale Android 5.0 Lollipop
2.2 2aad - Ku rakibida xoq (xoqitaan cusub oo ka yimid nooc kale oo Android ah)
Faylasha loo baahan yahay si loo rakibo ama loo cusbooneysiiyo LG G2-gaaga loo yaqaan 'Android Lollipop' oo ka socda LiquidSmooth
Faylasha loo baahan yahay waxay ku xaddidan yihiin faylka 'zip zip' iyo faylka Google Gapps, tan ugu yaraan kuwa horay uga yimid nooc hore Android 5.0 Lollipop. Qof kasta oo raba inuu ka soo rakibo meel ka soo bilaabanta wuxuu sidoo kale u baahan doonaa Zip SuperSu haddii ay doonayaan inay helaan mudnaanta Superuser, iyo sidoo kale modem ama baseband-ka moodelkooda si wareegga shaashadu u shaqeeyo.
Waxaan awoodi doonnaa inaan kala soo baxno feylasha xiriiriyeyaasha soo socda:
Rom Android 5.0 Lollipop Liquid Smooth loogu talagalay LG G2
Gapps Android Lollipop Google
LG G2 modem ama baseband
Dib u soo kabashada ayaa la cusbooneysiiyay qaabkeedii ugu dambeeyay
Sida loo rakibo Rom LiquidSmooth Android 5.0 Lollipop LG G2 (dhammaan noocyada)
1aad - Cusboonaysiinta ka socota Rom kale Android 5.0 Lollipop
Haddii aan horay uga nimid a Rom Android 5.0 hurdiga ah, sida tii kooxda Argagixiso in usbuucii hore waxaan halkaan ku wadaagnay halkan 'Androidsis', tallaabooyinka la raacayo waxay noqon doonaan kuwa soo socda:
Waxaan nuqul ka soo qaadnay Rom iyo Las Gapps xusuusta LG G2-ga
Waxaan dib ugu bilaabaneynaa habka Soo-kabashada.
Ikhtiyaar ahaan Tirtir waxaan samaynaa a Nadiifi khasnadda y Masax Dalvik khasnado.
Ikhtiyaar ahaan Ku rakib Waxaan doorannaa zip-ka Rom oo waanu rakibnaa.
Ikhtiyaar ahaan Ku rakib Waxaan doorannaa Gapps oo waanu rakibnaa.
Ugu dambeyntii ikhtiyaarka Tirtir waxaan samaynaa a Nadiifi khasnadda y Riix qaybta kaydka.
Ku rakibidaan waxaan ku xafideynaa barnaamijyadeenna rakiban iyo sidoo kale xogta nidaamka iyo codsiyada laftooda. Waxa kaliya ee inagu dhici kara ayaa ah in qaar ka mid ah codsiyada Google ama Launcher laftiisa xoog ayaa na xiraya, taas oo markaa aan ku xallin doonno adoo galaya liiska, codsiyada, xulanno dalabka na siinaya dhibaatooyinka oo tirtirno keydka iyo xogta.
2aad - Ku rakibidda xoq (rakibid cusub oo ka timid nooc kale oo Android ah)
Xusuuso taas Dib u soo kabashada waa in lagu cusbooneysiiyaa nooca ugu dambeeya ee la heli karo, markay tahay Nooca TWRP 2.8.1 waxay u shaqaysaa si dhammaystiran.
Waxaan nuquleynaa zip-ka Rom, Gapps-ka Google, SuperSU iyo zip-ka saldhigga qaabkeena LG G2.
Waxaan dib ugu bilaabanay Habka Soo-kabashada.
Waxaan samaynaa a Masax xogta warshad Dib u celi ama waxa la mid ah ka Wipe option dooro wax walba marka laga reebo xusuusta gudaha ee LG G2.
waxaan aadeynaa xulashada Ku rakib oo waxaan shidnaa sibiblaha Romka.
Waxaan aadeynaa xulashada Ku rakib mar labaad oo waxaan shidnaa sibilka Gapps-ka.
Waxaan aadeynaa xulashada Ku rakib markale oo waxaan shidnaa Zip-ka SuperSu.
Haddana Ku rakib oo annaguna waanu shidnaa kabadkeenna hoose.
Mar labaad ayaan sameynaa Nadiifi khasnadda y Riix qaybta kaydka.
Waxaan dib uga bilaabanay nidaamka dib udajinta hadda ikhtiyaar.
Hadda waxaan sugeynaa LG G2-gii oo dib loo bilaabayo, kaas oo qaadan doona ilaa toban daqiiqo, waxaana horeyba ugu raaxeysaneynaa midka cusub. Rom Android 5.0 Lollipop loogu talagalay LG G2 oo ka socda kooxda LiquidSmooth.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » LG » LiquiSmooth, Rom Android 5.0 Lollipop loogu talagalay LG G2 (dhammaan noocyadeeda)
61 faallooyin, ka tag taada
Si lama filaan ah qof halkan ka yimid ayaa i caawin kara ... Waxaan haystaa nooca Lg G2 d805, qalabka wuxuu si sax ah ula mid yahay d802 laakiin farqiga ayaa u dhexeeya kooxaha lte ... su'aashu waxay tahay sidee baan u rakibi karaa romaan kasta oo la kariyey, noqo waa tan ama kuwa cyanogen. iyada oo aan LTe-ga lumin ??????
Jawaab Juan Pablo Duga
Lt-ka waa inaadan lumin, illaa iyo inta roogga uu la jaan qaadayo qalabkaaga, xaaladduna sidaas ay tahay, sidaas darteed maahan inaad lumiyo lte-ka, illaa ay ka ahayd guuldarro Rom inuu ku jiro marxaladda hore.
Ku jawaab marc
Ku rakib baseband u dhigma kombiyuutarkaaga iyo voila, in kastoo qaar romka ka mid ah marka laga reebo rakibidda baseband-ka, waa inaad ka tirtirtaa dalabka nidaamka.
Jawaab Jota Castrillon
Waad salaaman tihiin. Sidee yihiin? Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii aan ku rakibo karo qaabka d806,
hubaal, waxaa loogu talagalay dhammaan noocyada lg g2.
Qaali, Waxaan haystaa Cloudy G3 2.0 oo ku rakibtay LGG2 d806 oo leh KitKat 4.4.2 / Waan ku cusbahay tan waxaanan jeclaan lahaa inaan arko haddii aan waayo Cloudyg3 inta lagu gudajiray rakibitaanka ama waa la ilaaliyay oo kaliya ayaan cusboonaysiiyaa Lollipop 5.0? Waxaan rajeynayaa inaan cadeeyay… Mahadsanid.
Haa, waa iska cadahay inay yihiin laba roms oo kala duwan, sidaa darteed waxaad isticmaali kartaa oo keliya labada romas midkood, waxaad isticmaali kartaa aalado ay ka mid yihiin multirom, oo marka aad taleefanka bilowdo kuu oggolaan doona inaad kala doorato romska aad rakibtay, laakiin kuguma talinayo waa tan, maadaama qalabka romsku uusan nadiif noqon doonin, waxaa fiican inaad sameyso qaab dhameystiran isla markaana aad ku rakibto romka, si ay si fiican u shaqeyso, iyadoo natiijada ka dhalan karta romkii hore.
hello ... Waxaan haystaa g2 d805 kee romka ah ee aan soo dejisan karo hadii 800 801 802 kaliya muuqato iyo waliba modemooyinka ma fahmin midka aan soo dejinayo si aan u ifiyo ...
Ku jawaab michael
rakib 802, boostada Evomagix-na waxaa ku yaal baseband-ka ay tahay inaad ku rakibto nooca qalabka aad haysato, baseband-ka daruurta leh ayaa sidoo kale shaqeeya
Runtu waxay tahay in CloudyG3 ay u shaqeyso si dhammaystiran iyo inta badan shaqooyinkeeda, feker ahaanteyda, way fiican yihiin. Qof ma awoodi doonaa inuu isbarbardhig kooban ku sameeyo waxyaabaha ugu waawayn ee khilaafku ka dhexeeyo ...
Hello Francisco, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii romkaan lagu rakibi karo g2 D805 maaddaama aan ka imid Kolombiya iyo haddii ay mudan tahay in la cusbooneysiiyo, maaddaama aan haysto Richi's CloudyG3 V2.1 oo qumman, iyo maxay horumarintu ku wada ahaan lahayd labadaba kamarad, batari, iwm Mahadsanid.
Waad salaaman tihiin, faallo ka bixiya hadii ay ka imaaneyso ROM kale oo aan ku saleysneyn Cyanogenmod, waa inaad keydisaa xogta kombiyuutarka, sawirada iyo kuwa kale tan iyo markii la abuuray buug cusub oo aanad heli doonin xogtaas, waxaa lagu talinayaa intaadan rakibin ROM-kan waxaad sameyneysaa rakibida Cyanogen ROM si taasi aysan u dhicin
Ku jawaab ruymanca
francisco romkaan waa mid fantastik ah ... mahadsanid waxaad tahay herukeyga cusub
Ku jawaab sabinord
Ku rakib romerka iyo wax kasta oo fiican, laakiin dami taleefanka oo markii aad daarto ma dhaafayo astaanta LG.
WAAN U BAAHAY CAAWIMO
Waan kaa caawin karaa inaad xalliso, marar badan ayey igu dhacday aniga, ii sheeg sida aan kuula soo xiriiri karno aniguna waxaan kaa caawin doonaa dhibaato la'aan
Mahadsanid Marc, email iigu soo dir p.rial95@gmail.com
Waan jeclahay romka laakiin wali ma isticmaali karo xposed ... taasina waa hal dhibic oo ka yar ... ma jiraa qof og hadii la isticmaali karo ...?
Ku jawaab matias
sidoo kale waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii aad qarin karto bar-tilmaameedka, maaddaama aan u adeegsaday moduleka culeyska culeyska ee kk, waxaan isku dayay apk mana shaqeeyaan…. xal ma jiraa?
Waa suurtagal in la badbaadiyo horumarka cayaaraha. Miyaan lumin doonaa dhammaan xogteyda ku jirta xisaabaadka cayaarta, CombatModern5 ???
Waa salaaman tahay, ROM-ku si wanaagsan ayuu u socdaa, dheecaan badan yahay Dhibaatadu waxay tahay in xitaa markaan iftiiminayo ZIP-ka SU, aanan heli karin marin xidid, oo aan ugu baahanahay qaar ka mid ah hawl maalmeedka taleefanka. Ma aqaano inay sabab u tahay barnaamijka softiweerka ama inaan si sax ah u rakibin (in kasta oo aan raacay dhammaan tallaabooyinka). Waxaan isku dayay tuwaalka, jajabka, iyo iftiiminta nooc kale oo ah SU iyo waxba. Ma jirtaa wado lagu rujin karo mobilka ROM-kan oo shaqeynaya? Aad baad ugu mahadsantahay horay.
Sidii oo kale ayaa igu dhacday. Haddii aad xal hesho, fadlan ii sheeg.
Wixii Qs lumay helitaanka xididka: (xal macquul ah)
-Waa inaad soo dejiso barnaamij furaya labada nooc (activeroot, framaroot, iwm)
-Daaji SuperSu ka Play Store.
-Download app si aad wax uga beddesho soo kabashada (hadda waxaan xusuustaa oo kaliya Maareeyaha Rom)
KA DIGTOONOW, WAA XALKA SUURTAGALKA AH !!
Jawaab Mateo Gomez
Horey ayaan u cusbooneysiiyay, interface-ku waa mid aad u fool xun, oo aan la dhihin midka xun, waxay umuuqataa nokia, ilaa iyo hada laga niyad jabay muuqaalka muuqaalka, oo aad ugu liita dhanka sawirada; (Waxaan sii wadi doonaa tijaabada
Ma jiro RadioFM, waa maxay magaca arjiga ku habboon ee loo yaqaan 'g2'?
Waxaan kugula talinayaa inaadan rakibin, waxaan dhib kala kulmayaa toosinta shaashadda aniga oo laba jibaaraya shaashadda. Ma jiro wax FlashPlayer ah oo taageeraya nooca 5.0 oo sidaan sheegayo majiro RadioFm
Waxay u socotaa si habsami leh laakiin qalad ayaan ku dhacaa markaan furayo dukaanka ciyaarta shabakaddayduna ma shaqeyso (Weligay ma aan helin caymis)
Oo sidee u beddelaysaa cabbirka baararka?
Rooma wanaagsan !!
Waxaan sidoo kale rabaa inaan ogaado sida loogu laabto cludyg3 2.1 maadama codsigan uu aad uqurux badan yahay, kamarad bilaa ikhtiyaar ah, idaacad la'aan, ciyaaraha lacag bixinta qaarkood ma socdaan ama dib ayey u bilaabayaan, VPN isma waafaqsana. Fariimaha ma yeeraan. Sikastaba dhib
Waxaan isticmaalayay 5 maalmood oo sifiican ayey u shaqeysaa, garaaca, wifi, 4g, wareega shaashadda, batteriga wuxuu i siiyaa sida romka kaydka (inta u dhaxeysa 5 iyo 5 iyo badh saacadood shaashadda Maalin iyo dhexdhexaad isticmaal dhexdhexaad ah), waxaan u rakibay ApK raadiyaha oo si aad ah ayuu u shaqeeyaa, waxaan rakibay kamaradda googler-ga si aad ahna way u socotaa. Runtii way fiicantahay inaadan noqonin nambarkii ugu dambeeyay
Fadlan iga caawi iskuxirka raadiyaha iyo kaamirada CASTRILLON, aad baan u mahadcelinayaa
Sidee ku garaacday garaaca shaqada adiga? Kama dhigi karo inay shaqeyso, ma inaan bilaa shaanbad kasta?
Ku jawaab Tuti
Jawaab Erick Mauricio
emailkaygu waa emsv_54@hotmail.com sidii aan horay u sheegay waxaan rakibay rucubkaan xalay laakiin saaka unbaa dib loo bilaabay hadana waxay i weydiisatay inaan dib u bilaabo waxayna ku sii jirtaa astaanta lg iyo android kumbuyuutarkaygu waa g2 d805 hadii qof uu iga caawin karo sixitaanka qaladkan mahadsanid
Isku qaab ayaan iskulahay waqti badana waan kuqaataa taas, hadaad rakibtid baseband-ka nooca 802 eur mood, ma bilaaban doono, rakib la'aan taas oo dhib la'aan ayuu ku shaqeyn doonaa
Ku jawaab Julio Parra
Waxaan kuu soo diray emayl si aad u hagaajiso g2-gaaga
Aad baad ugu mahadsan tihiin macluumaadka, waan xaliyay dhibaatadii waana awoodaa inaan mar kale soo raro. salaan
Ku rakib Rom laakiin waxay noqotay niyad jab guud. Ma akhriyo xusuusta gudaha inkasta oo aan raacay talaabooyinka uu Francisco ku xusay boostada hadana kumaan guuleysan in aan saxo qaladkan, xitaa xitaa ma ogolaaneyso in lagu rakibo maamule faylka goobta Play Store. Labada shaashadood ee shaashadda ayaa kaliya u adeegta in lagu furo si aan loo xannibin, ma laha raadiyaha FM ama codsi dhexdhexaad ah oo habboon oo loogu talagalay kamaradda, waa inaad isticmaashaa Google Sawir gacmeedyadu aad ayey u liitaan dhex-dhexaadintuna waa mid aan fiicnayn haddii aan laga nixin, astaamuhu waa wax aad u xun. Waxaan ku soo noqday Cloudy G3 V2.0 oo wax weyn ii qabanaya, bilicduna waa wax aan caadi ahayn. Si daacadnimo ah uma aanan ogaan in isticmaalka batteriga uu yaraaday, taa bedelkeed, xoogaa ayuu kordhay xawaareyna wuxuu u dhigmaa Cloudy.
Sideed ugu soo noqotay daruuraha? hadda waxaan helay qalad kale oo aanan helin emailada Muuqaalka ee aan ka furayo biraawsarka, gebi ahaanba waan ka xumahay iyo haddii batteriga la liqo
Waad salaaman tahay CRISTIANZAO, waa inaad taleefanka ku xirtaa PC-ga oo aad kala soo degtaa ROM-ka iyo Baseband-ka u dhigma moobiilkaaga xusuusta LG, markan oo kale, dami oo taabo badhanka korontada + mugga, marka ay calaamadda LG kuu muuqato kaliya sii daa badhanka korontada oo mar labaad riix. oo ay ku xigto shaashadda Dib-u-warshadaynta Hard Factory, ku dheji awoodda laba jeer waana inay kuu qaadataa dib u soo kabashada TRWP, halkaas ayaad ku iftiimineysaa Rom. Dhibaatooyin ayaan ku qabay bilowgii maxaa yeelay D805-kaygu ma aqoonsanin ROm markii aan u qaabeeyey inay tahay 805, waxay ahayd inaan sameeyo anigoo kaashanaya midka 802 oo ay ku rakibtay dhibaato la'aan, ka dib waxaan ku soo laabtay Flashing anigoo adeegsanaya qaabeynta 805. Dhibaato kasta oo ku haysa ii sheeg, waxaan halkan u nimid inaan na caawinno ..
Ku soo jawaab HECTOR
Saaxiibku wuxuu nuqul ka sameysanayaa saldhiga hoose iyo xusuusta G2.1 ee daruuraha leh, markaan isku dayo inaan soo kabsado adoo daminaya unuga, ma soo galayo, iskuday inaad gasho adoo rakibaya reboot deg deg ah laakiin waxay ii sheegaysaa inaanan haysan TRWP rakibay ama soo kabasho wax laga badalay, waa qol fanstidio ah, Cloudy wax dhibaato ah ma uusan siinin. Waxaad iigu soo diri kartaa macluumaad cristianzao@live.com mahad
Waad salaaman tahay, waxaan haystaa LG G2 D803 oo romka gaarka ah ee tusaalahan meesha ma yaallo… xaggee ayaan ka helayaa inay kusii socoto hawsha cusboonaysiinta Lollipop, fadlan caawi !!
Haye, waxaan raacay tillaabooyinka oo dhan, laakiin hadda ma haysto marin xidid ah. Maxaan sameyn karaa?
Isla wixii saxda ahaa ayaa igu dhacay, waan rakibay oo xidid ayaa iga lumay oo ma jirto wado lagu soo kaban karo, horeyba waan isku dayay wax walba
Waad salaaman tahay, fadlan qof dariiqa saxda ah ee aad ugu noqon karto nooca 'CLODYG3', qolkani waa kan ugu xun, ma jiro wax QuickRemote ah, kama soo gudbin kartid fiidiyowyada qolka unugga illaa SmarTV, dhibaatooyinka xagga boostada ah, kaamirada ayaa ugu xun, dib ayey u bilaabmaysaa markii aan ciyaarayo, ma mudna in la furo laba jeer in la furo. Waxay ficil ahaan tilmaamaysaa inaanan hayn TPWR Recovery. Sikastaba, gacan yar oo asxaabteyda ah. Wicitaanku waa qas, waxaan gali karaa sheekada oo waxaan diri karaa SMS, laakiin tan ma awoodi kartid.
Sababtoo ah cadaabta aanan aqrin faallooyinka, waad iga badbaadin laheyd dhibaatooyinka QOLKAAN, waxay umuuqataa in wiil dhalinyaro ah uu sameeyay, waxyaabo badan ayaa dhiman, aad ayaan ugu faraxsanahay daruuraha oo ahaa 10/10 Haddii kuwa weydiya sida si aad ugu noqoto daruuraha raadso xalka fadlan ku dhaji.
Waad salaaman tahay magaca JUAN, maxaa yeelay sida muuqata kaliya saaxiibkeen PANCHO ayaa ku faraxsan qolkan, hehehe, safka gal oo waxaan rajeynayaa haddii maamulaha qaar naga caawiyo inaan ku laabanno DHAQANKA caanka ah.
sida aad u aragto in qofna uusan sifiican u aqrin boostada, si aad ugu bilowdo waa wax iska caadi ah in android saafi ah aysan ku jirin lg apps, xaqiiqda ah inaysan iyaga ku jirin micnaheedu maahan in romku xun yahay, kaliya waa inaad ogaataa wax yar oo in la sii wado haddii aad eegto internetka waxaa jira xal lagu hagaajinayo tuubbada laba-jibbaar ah, kaliya feyl ku feker. Sikastaba, waxaa jira barnaamijyo lg ah oo aad rakibi karto, kuwaas oo u diyaarinaya in lagu rakibo romas kale oo ku saleysan aosp.
Hagaag kuwa weydiiya sida loogu soo laaban karo si fudud, waxay u guuriyeen qolka G3 V2.0 + baseband qaabkooda. Waxay soo galayaan qaabka soo kabashada, wax walbo wey ifinayaan marka laga reebo xusuusta gudaha, ka dib marka hore waxay rakibayaan saldhiga hoose kadibna romanka, rakibayaasha carafta ayaa soo muuqan doonta waana taas, waxaan cusbooneysiiyaa 2.1 markalena waan faraxsanahay.
Wanaagsan! Waxaan haystaa LG G2 D805 oo garaacida garaacisku iima shaqeeyo. Isku day feylka ay ku bixiyaan qaybta dhibaatooyinka suurtagalka ah laakiin waxba. Kama soo kaban karo ikhtiyaarkan inaan shaashadda shido, si aan u damiyo haddii ay shaqeyso. Haddii qof i caawin karo, mahadsanid Waa roman aad u wanaagsan.
Qaar ka mid ah cayayaanka oo runtii saameynaya adeegsiga qalabkeyga, wax sida kamarad, wifi, xog?
Jawaab JC Heredia
Runtii waan jeclahay romanka, waa waxa aan marwalba raadsado laakiin dhibkeyga yar ee weyn ayaa ah sideen uga dhigi karaa inay aqoonsato xusuusta, xitaa xitaa markaan isku xiro ma aqoonsana maxaa yeelay markaan furo waa madhan tahay, sikastaba ha ahaatee waxay umuuqataa aniga inay jirto xasuus weyn oo horey loo adeegsaday.
Waad salaaman tahay qofkastoo i caawiya maxaa yeelay LG LG G2 OO UU MUUQATO LCD LAGU QAADAY WAA MAXAY AMA MAXAAN SAMEEYAA?
Ku jawaab diego fernando malagon
arick erick escamilla dijo
Waad salaaman tahay waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii ay qof ku dhacday ama haddii qof i caawin karo, waxa dhacaya ayaa ah markii aan rakibey romkaankan (oo gaaraya 100) waxaan waayey xididka, sidaas darteedna sidoo kale waan lumay soo kabashadi oo ma heli karo qaab kasta oo mar labaad xidid looga dhigto, haddii qof i caawin karo runtii waan ku qanacsanahay, (G2-kayga waa D805) ka hor mahadsanid 🙂
Ku jawaab erick escamilla aviles
Waa salaaman tahay, isla wixii saxda ahaa ayaa igu dhacay, waan rakibay oo xidid ayaa iga lumay mana jirto qaab lagu soo kabsado.
Dhammaantiin waad salaaman tihiin, waxaan su'aal qabaa, noocee ah ayaan sameeyaa haddii aan haysto D805? Waan ka gaabiyey oo waxaan rabaa inaan rakibo roogaankan. Mahadsanid. 😀
Haddii aad i caawin karto, waxaan haystaa Lg g2 D806, waxaan ku haystay rajada G3 rom, waxaan doonayay inaan rakibo romkaankan, dib u soo kabashada cwm, D802 waxayna ii sheegtay in taleefankayga uu yahay D806 aan awoodin, Waxaan isku dayay inaan bedelo soo kabashada twrp, oo leh otorec, taleefankayguna waa la garaacay, wuxuu ku dhegan yahay astaanta LG, laakiin halyeeyga "qaladka amniga" ... haddii aad i siin laheyd gacan sidii aan ugu soo celin lahaa nolosha . Mahadsanid
Ku jawaab sirmorocho
Qof ma i caawin karaa? Waxaan u baahanahay inaan ku daro galka 'supersu', horeyna waan u iftiimiyaa romka, sideen u sameeyaa si aan ugu daro celiska mar kale?
Fudud, haddii taleefanka gacantu mar kale daarto, dib ayuu u bilaabmaa soo kabashadii iyo bilig biligleynaya, haddii moobaylku daaran yahay ee uu qabsado ka soo kabashada ayaa dhalaalaya, taas oo la yaab leh in ay dhacdo.
aad ayaan ugu faraxsanahay roomaantan, wey ila shaqeysaa aniga, si kadis ah cyanogenmond12 maadaama ay baateri aad u badan baastay.
Mudanayaal, waxaan cusbooneysiiyay lg g2 d805 oo wey fiicneyd, waxa kaliya ee kaliya ayaa ah in nooca lillipop 5.0.2 uusan keeneen raadiyaha FM, laakiin sida aan aqriyay, cusbooneysiinta ay soo dejisay OTA barnaamijka waa inuu yimaadaa, Waxaan ku soo lifaaqayaa xiriiriye fiidiyowga fiidiyowga ah si ay si fiican u sameeyaan oo u keenaan xiriiriyeyaasha soo dejinta ee dhammaan codsiyada lagama maarmaanka ah, waxaan rajeynayaa inay kuu adeegi doonto
Ku jawaab ANDRES FERNANDEZ
MX Player video player wuxuu hadda taageeraa Android 5.0 Lollipop
5 barnaamij oo layaab leh oo loogu talagalay xididka Android